Nzira yekusika sei backlinks akawanda panguva imwe chete?
Parizvino, munhu wese anoziva kuti backlinks haisi kusikwa zvakaenzana. Kuvakwa kwekugadzira kwakanga kuri nyore nyore injini yekugadzirisa maitiro mberi kweGoogle kusimbisa Penguin purogiramu yacho. Mazuva ano, kana iwe ukanyora nyaya dzakawanda uye ukazviisa kune zvakasiyana-siyana nyaya dzekutumira nzvimbo, hazvingakupei mhinduro kana kutora injini yekutsvaga chirango - sala giochi milano e provincia. Uye, yeuka, hapana anoziva zvichaitwa neGoogle zvinotevera. Nguva imwe neimwe iwe uchiedza kutsvaga mutsva yekutsvaga shanduro, iwe unofanirwa kuva wakagadzirira kuwana zvirango.
Zvisinei, haisi chikonzero chekurega kuita chinhu chekutsvaga chikwata. Panzvimbo yazvo, unoda kudzidza kuti ungaita sei zvikwata zvepamusoro zvakashamisika nenzira yakarurama.
Musatenda chero ani anotaura kuti chivako chivako chakafa. Zvokudzokera shure zvinoramba zviri izvo zvakanyanya kushandiswa. Zvisinei, kungove ega yega ega uye yakaenzana yakawanikwa inogona kuunza mugumisiro.
Iyi nhaurwa yakagadzirirwa kugovera newe mamwe mazano anobatsira kuti uite zvikwiriso nenzira inopera.
Nzira yekugadzira nheyo yakasimba yekuvaka chivako?
Ngatifunge kuti iwe unogadzira chigadzirwa chezvinhu zvitsva uye unoda kukurudzira pane peji yekutsvaga kweGoogle peji. Sezvo iwe uchiziva kuti zvakasimudzirwa zvikuru PR zvinowanikwa kubva kuhutano kubva panzvimbo dzakanaka, hazviiti here kuti zvive nekunzwisisa kuunza zvibatanidza zvakashamisika nokukurumidza sezvinobvira? Hazvisizvo kuvaka huzhinji hunobatanidza nehuwandu hwezvakagadzirwa munguva pfupi. Mabasa akadaro achatarisa kuGoogle. Mhinduro yakanakisisa ndeyokubatsira Google kuwana nekunyora zvaunenge uchitaura. Zvinotora nguva asi uine humwe hunokosha kune site yako. Pane imwe nguva zvinyorwa zvako zvingave zvakakonzerwa, unogona kuwana organic link juice uye uvandudze nzvimbo dzako.
Nzira yekubatsira sei Google kuwana nekunyora zviri mukati mako?
Kukurudzira nzira yehuwandu hwehuwandu hwemashoko, unogona kushandisa Alexa tool. Vanhu vanoita webhusaiti vanoona nzvimbo iyi nguva dzose. Paunenge uisa ruzivo rwemuzinda wako URL pane Alexa tool, iyo ichangoerekana yawedzera peji yako itsva, yakagadziridzwa kune database. Apo tsvakurudzo dzekutsvaga dzichiratidza nzvimbo yako zvakare, yako yepakutanga chigadzirwa chechinyorwa chichatsvaga neGoogle pamwe chete.
Imwe nzira yakakosha yekukwezva Google bots kune yako yehupenyu ndeyekugadzira zvido zvepographics. Inogona kukushandira iwe semagariro evanhu anobatsira nekukurumidza kuratidza uye kuonekwa. Ndiko kusaka kana zvinyorwa zvako zvitsva zvichizivikanwa pane zvigadzirwa zvemasangano, zvinopa chiratidzo kuneGoogle kuti vashandisi vanowana huri hwehutano hwehutano uye hutano hwakakosha. Zvinoreva kuti panguva yaunotanga kubudisa zvibvumirano zvekunze zvakapoteredza unhu hwehutano hwehutano, chero hupi hwehutano hwehutano hunova huri.
Zvisinei, iwe unofanirwa kuve nechokwadi kuti iwe unobatanidzwa zvakakosha uye zvinobatsira kune vateereri zvinyorwa sezvo zvinyorwa zvose zvitsva, zvinyorwa kana chibatanidzwa zvinofanira kupa humwe huwandu kune vatengi vako.
Sekutonga, chidimbu, chechivakwa chechivakwa chisingatauri hachifungi nezvemagumo-user. Zvisinei, kuti uwane unhu hwakanaka hwejisi uye unotarisa zvakasikwa mumaziso emitsva yekutsvaga, unofanirwa kuisa pfungwa pane izvo zvinotarisirwa nevateereri vako vanoda. Vaverengi vako havafaniri kuzvidemba kuti vanotevera chirevo chinonzi.